दिनमा कति पानी पिउने ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ११ मंसिर बुधबार ०९:०८
पानी र जीवनको गहिरो सम्बन्ध भएझैँ पानी र स्वास्थको पनि गहिरो सम्बन्ध छ । पानीको मात्रा, पिउने समय र पिउने तरिकाले स्वास्थ्य लाभ वा हानीको निर्धारण गर्दछ । हाम्रो शरीरको २र३ भाग पानीले बनेको हुन्छ । पानी बिना शरीर भित्रका कुनै पनि क्रियाहरू सम्भव हुँदैनन् । शरीरका क्रियाहरूमा अवरोध सिर्जना भएमा हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रन्छ । तसर्थ, हाम्रो स्वास्थ्य पानीमा भर पर्दछ । प्रशस्त पानी सही समयमा र सही तरिकाले पिउने गरेमा हामी धेरै रोगबाट बच्न सक्छौँ।
पानी कति पिउने ? शरीरले आफ्नो क्रियाहरु गर्दा पानीको प्रयोग गर्नुको साथै शरीरलाई राम्रो परिस्थितिमा राख्न विभिन्न अङ्गहरूबाट केही मात्रामा पानी शरीर बाहिर निस्कासन गर्दछ । साधारणतया केही काम नगरी त्यतिकै बस्दा श्वास–प्रश्वास र छालाको माध्यमबाट ७०० मि।लि, दिसाबाट १०० मि।लि, पिसाबबाट १५०० मि।लि गरि लगभग २।३ लिटर पानी शरीरबाट प्रतिदिन बाहिर निस्कासन हुन्छ तर मौसम र हाम्रो कामको प्रकृति अनुसार शरीरबाट बाहिर निस्कने पानीको मात्रा घटबढ हुन्छ ।
PREVIOUS Previous post: सहमतिमा नआए निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने गृहको निर्णय
NEXT Next post: केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग – विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै